I-VOYEUR YENETFLIX: UKUJONGA NGOKULOBA OKUKHULU UTOM UXWEBHU LUYAKOYIKISA KUDE KWI-MOTELS NGONAPHAKADE-IRADIO TIMES - AMAXWEBHU
I-Netflix's documentary eyoyikisayo yeVoyeur iya kukoyikisa kude nee-motels ngonaphakade
Ngo-1980, intatheli eyaziwayo yaseMelika kunye nombhali uGay Talese wafumana ileta evela kumnini-hotele egama linguGerald Foos, enika ibali.
UFoos ubhale ukuba uthenge i-Manor House motel, igumbi elinamagumbi angama-21 kufutshane naseDenver, eColorado, ukuze anelise ukuthanda kwakhe ngokuhlola iindwendwe zakhe kwigumbi elifihlakeleyo eluphahleni- kwaye wamema uTalese ukuba eze ezokuzihlola.
Ngenzondelelo emthatha kwisithembiso sakhe, uTalese wamjoyina kwiqonga lakhe lokujonga eligqwethekileyo kwiinyanga ezimbalwa kamva, apho aba babini babona isibini esitshatileyo sisondelelana- konke egameni lobuntatheli. Kodwa ibali alizukuqhekeka eminye iminyaka engama-30 njengoko iiFoos zingalivumeli igama lakhe ukuba lirekhodwe, kwaye uTalese wayeza kuchitha amashumi eminyaka egcina imfihlo awayezimisele ukuyenza ngabom.
UGerald Foos (ngasekhohlo) kunye noGay Talese (ngasekunene) kwiVoewur yeNetflix
Kuba imisebenzi engathandekiyo kaFoos yabekwa elubala nguTalese kwi isiqwenga sesiqhushumbisi sika-2016 eNew Yorker , kwaye kamva yabhalwa kakuhle kwincwadi ebizwa Motel yeVoyeur , Bachukunyiswa ngokukhawuleza yiNetflix yokuphazamisa amaxwebhu amatsha uVoyeur, othe endaweni yoko wagxila ngakumbi kubudlelwane phakathi kwala madoda mabini kunye nokuziphatha okungathandabuzekiyo kweendaba ezaligcina ibali lifihlakele iminyaka emininzi kangaka.
I-Foos yayifikelele ku-Talese ngokuchanekileyo kuba wayecinga ukuba umbhali uya kuvelana nesizathu sakhe-u-Talese wayesandula ukukhupha Umfazi Wommelwane Wakho, iprofayili ephezulu, ukuhlola okuthatha inxaxheba kwe-free love subculture e-USA kwii-1970s- kwaye wayelungile.
Kwasekuqaleni kwefilimu intatheli iqinisekisa umntu osebenza naye ukuba iFoos ayinangxaki, ngaphandle kokuba inamakhulu amaphepha edayari echaza ngokweenkcukacha indlela awayeyibukele ngayo - kwaye wayehlala ephulula amalungu esini - kubahlali baseManor House motel ngaphandle kwemvume yabo.
Ngomncinci osekhohlo wokulahleka, kunye nomnqweno obonakalayo wokufumana ukungaziwa ngenxa yezenzo zakhe eziphazamisayo, uFoos yincwadi evulekileyo, evumela abenzi beefilimu uMales Kane noJosh Koury baxakeke kukufikelela ebomini bakhe kwiiveki ezikhokelela ekukhululweni kwencwadi. Uguqukile enekratshi, enoburharha kwaye engaqhelekanga njengomntwana.
Okufanayo akunakuthethwa kuTalese, oshiya ifilimu njengoko iqhubeka kunye neendlela zakhe zobuntatheli, ebesele ezenzele zona kunikezelwe ngokucebileyo ngaphambili , zibuzwa. Iqhayiya, into engama-80 kumanqanaba okuhlwa omsebenzi obalaseleyo, uhlala ebonakala engonwabanga ngomgca abenzi beefilimu abawenzayo- bobabini kunye naye kunye nabaFoot.
Ewe, uKane kunye noKoury benza ngobuqhetseba bamse emsebenzini ngokungakhathali ukuxela ulwaphulo-mthetho lwezifundo zakhe emapoliseni, kwaye ngamanye amaxesha avumele isigwebo sakhe sigutyungelwe ngumnqweno wokophula ibali eliyinyani ngokwenene.
Kodwa njengoko izifundo zabalinganiswa zihamba, uVoyeur akenzi ngokwaneleyo ukusinceda ukuba siziqonde ngokwenene izenzo zombhali. Udlala indima encinci kwi-crescendo ye-documentary, emva kwehlazo elisongela ukutshabalalisa ukuthembeka kwamadoda, kwaye sishiywe ukuba sihlangane kunye nendlela azilungisa ngayo iimpazamo zakhe.
Lilonke, iwotshi enomdla kodwa abo bafuna ukubona ibali ngokwalo liphandwa nzulu ngakumbi bajolise kubo Inqaku laseTalese laseNew Yorker lokuqala (nangona mhlawumbi nge intwana yetyuwa ).
I-Voyeur ikhutshwa kwi-Netflix nge-1 ka-Disemba.
ezona fowuni zisebenzisayo ngolwesiHlanu
Inombolo entsha yesiteshi se-bbc scotland
Iza kukhutshwa nini iphone 12
rangers v kilmarnock bukhoma umsinga we-youtube
izinto zakhe ezimnyama zokufota
ubukumkani bokugqibela ubukumkani bokugqibela baphoswa